using rapidshare-dl on ubuntu – box02's little blog
January 11, 2009 by box02
using rapidshare-dl on ubuntu
ကျနော် movies တွေကို download လုပ်ဖို့ပျင်းနေခဲ့တယ်။ နောက်တော့ rapidshare downloader ကိုရှာမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး google မှာရှာတာ ubuntu အတွက် rapidshare-dl ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ကျနော့် ubuntu က hardy ဆိုတော့ ကျနော့် ubuntu distro နဲ့ကိုက်မယ့် repository ကိုသွင်းလိုက်ပါတယ်။
Repository သွင်းမယ်ဆိုရင် ..
အဲဒီ sources ဖိုင်ထဲမှာ အောက်ကလိုင်းကို copy ပြီး paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ubunut intrepid ကိုအသုံးပြုသူများကတော့ hardy အစား intrepid လို့ပြောင်းပြီး သွင်းပေးလိုက်ရုံပါ။
$ sudo apt-get install rapidshare-dl
software installed လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ movies တွေ download လုပ်ဖို့ပြင်လို့ရပါပြီ။
ကျနော်ကတော့ Links file ကို အောက်က Fig(1)ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း gedit နဲ့ QoS လို့နာမည်ပေးပြီး rapidshare links တွေကို paste လုပ်ပေးပြီး Desktop ပေါ်မှာ save ပေးလိုက်တယ် (QoS နာမည်အစား ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအဆင်ပြေရာ နာမည်ပေးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။) ပြီးရင် အောက်က command အတိုင်း run ပေးလိုက်ပါ။
$ rapidshare-dl QoS
ပြီးရင် rapidshare account login name နဲ့ password ကိုမေးလာလိမ့်မယ်။ login name နဲ့ password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ လင့်ဖိုင်မှာရှိသမျှ rapidshare links တွေအားလုံးကို ပြီးစီးအောင် အလိုအလျောက် download လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် download လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ login name နဲ့ password ဟာ ~/.rapidshare-dl ဖိုင်မှာ မှတ်ထားပေးပြီးသားမို့ အဲဒါတွေကို ထပ်မမေးတော့ပဲ တိုက်ရိုက် download လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ ကိုယ့် rapidshare account က expired ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လဲ အဲဒီဖိုင်မှာ update လုပ်ပေးပြီး downloads တွေကို ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Fig(1): Links File ကို gedit နဲ့ပြင်ပြီး QoS နာမည်နဲ့ save ထားပုံ
Fig(2): Terminal ထဲမှာ rapidshare-dl QoS လို့ရိုက်ပြီး QoS ဖိုင်ထဲက Links တွေကို download လုပ်နေတဲ့ပုံ
rapidshare-dl on ubuntu
rapidshare-dl အကြောင်းကို အပြည့်အစုံသိလိုပါက http://mundogeek.net/rapidshare-dl/ မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Linux and tagged Downloaders, hardy, Linux, Rapidshare, Ubuntu. Bookmark the permalink.
← Converting *.mkv to *.avi on Ubuntu
unzip and zip files in Terminal on ubuntu →